China Backpack T-B3142A Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU yakawanda-chinangwa laptop bhegi
Iyo fashoni yakagadzirirwa laptop bhegi, yakakwana kune varume, vakadzi kana kushandiswa kwevadzidzi kwemazuva ese kubhizinesi, chikoro, koreji uye nekufamba.
Chinyorwa: Iri bhegi rakagadzirwa nesplashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, mhando yepamusoro, yakasimba, eco-inoshamwaridzika.High elasticity sponge padded shoulder shoulder straps and back offers extra back support and comfort. Iyo anti-ponji 4 zino zipi yeiyo huru kamuri inopa kaviri anti-kuba kudzivirirwa neyakavharwa zipi inopa kwakanyanya kufamba kwekuchengeteka kwauri.
Inonyaradza Kudzoka Sisitimu Yekutsigira: Ergonomic-yakagadzirirwa padded bhanhire tambo uye musana, yakagadzirwa kubva pakakwirira-kusimba uye mweya unofema neshinda. Yakashongedzerwa nechinogadziriswa chipfuva bhegi uye chinogadziriswa chindori hasp, inoita kuti iwe ugone kudzora tambo kureba zvakasununguka uye inoderedza mutoro wehuremu. Bhegi redu rinopa imwe tsigiro uye nyaradzo kumusana wako nemapfudzi.
Slim Dhizaini & Super Anoronga: Saizi yesaga iri 33 * 20 * 49cm (L * W * H), inokwana palaptop inosvika 17 ″. Iyo yakatetepa mativi ekuona inowirirana nebhizimusi-yekushandisa zvisina tsarukano.Imwe huru kamuri inogona kunge yakavhurika yakavhurika neyakavakirwa-mukati ine padhed laptop sleeve uye piritsi ruoko. Iyo inokwana zvakakwana kune zvako zvese zvezuva nezuva zvaunoda; homwe imwe yekumberi nehomwe mbiri dzeparutivi kuitira nyore kuwana; imwe yakavanzwa kumashure zipi muhomwe yakakwana kune ako akakosha. Iri bhegi rinogona kukubatsira kubvisa kuchera kwakatenderedza muhombodo. Zvese zvigadzirwa zvichave zvakarongeka.
Chikwama ichi chipo chakanaka chevadzidzi vekoreji yepamusoro vadzidzi vevakomana, vasikana, vechidiki, vakuru .Tinogamuchirwa kujoina TIGERNU.
Model Nhamba T-B3142A
Kurongedza: 24/20 pcs / ctn
Saizi: L33 * W20 * H49 cm / L33 * W16 * H49cm
Style: Zororo, Mufashoni
Inokodzera saizi yelaptop: Kusvika ku17 ＂(Max Laptop Saizi: 28 * 40cm)
Zvinhu: Splashproof & muva kusagadzikana 70 * 200D Nylon
Feature: Kukwanisa kukuru; Splashproof;
Pashure: Mukwende T-B3142
Zvadaro: Mukwende T-B3143
fashoni yakasarudzika bhegi remudzidzi
zororo rekufamba bhegi
tigernu bhegi revarume
Crossbody Bhegi T-L5108